Wina umakhalekhukwini kanokusho we-Nokia. Bamba INHLANZI ENKULU. | Scrolla Izindaba
Ubani ozoboshwa ngokulandelayo kula macala obugebengu bokulawulwa kombuso?
Ngenela umncintiswano wethu – bese uwina umakhalekhukwini wakwanokusho we-Nokia noma umoya wakwa-MTN ofinyelela ku-R500 uma uqagela ukuthi ngubani osezobingelela uZondo.
Ngemuva kwezinyanga kukhulunywa, Isiphathimandla Sezokushushisa Kuzwelonke sibambisene noklebe baqala ukulandela umkhondo kaZondo, babopha abantu ngoMandulo.
Usomabhizinisi uEdwin Sodi ube ngowokuqala owaboshwa ngenxa yokukhwabanisa imali eyizigidi eziyi-R225 yenkontileka yokufaka ama-asbestosi e-Free State.
Abathathwe kanye naye bekungumphathi woMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu e-Free State, uNthimotse ‘Tim’ Mokhesi kanye nowayenguMengameli wezokuHlaliswa kwaBantu kuzwelonke uDG Thabane Zulu.
Ikhomishini kaZondo, ngaphansi kwephini lenhloko yamajaji uRaymond Zondo, ibiphenya ukulawulwa kombuso’ ngesikhathi kusaphethe uJacob Zuma. Umkhondo ulandele umndeni wakwaGupta kodwa wahlomula wabheka abanye abenzi bokubi.
Inkulumo ehlakaniphile ukuthi iholwa yikhomishini, i-NPA – kanye noklebe – inyusa uchungechunge ukuze kuboshwe osopolitiki abaphezulu kanye nezikhulu ezangena kuleyo mali.
Amagama amaningana ayajikeleza.
Ucabanga ukuthi iyiphi ‘inhlanzi enkulu’ elandelayo?
Chofoza lapha ukungenela umncintiswano – kuzothatha imizuzwana embalwa kuphela.